भ्रमण वर्ष २०२० लाई सघाउला सागले ? - Vishwa News
भ्रमण वर्ष २०२० लाई सघाउला सागले ?
December 2, 2019 ० बिचार / प्रतिक्रिया
काठमाडौं । करीव ५ हजार विदेशीको नेपालमा एकसाथ जमघट । यी सबैको पासपोर्टमा नेपाली अध्यागमनको छाप लाग्दा उनीहरु नेपालका पर्यटकमा त अवश्य गनिनेछन्, सँगै नेपालले उनीहरुबाट त्यसको कैयौं गुणा प्रवद्र्धनको अपेक्षा गरेको छ ।
किनकी साग सम्पन्न भएको केही दिनमै नेपालमा औपचारिक रुपमा नेपाल भ्रमण वर्ष प्रारम्भ हुदैछ । नेपालले एकसाथ दुई भब्य इभेन्ट एक महिना भित्रै गर्न गइरहेको छ, त्यो पनि दशरथ रंगशालामै ।
१ जनवरीको दिन रंगशालामा एक भब्य कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ, जहाँबाट एकसाथ विश्वभरका पर्यटकलाई नेपाल आगमनका लागि आह्वान गरिदैछ । सरोकारवाला सागबाट निकै ठूलो अपेक्षामा छन् ।
किनकी सागमा सम्बन्धित मुलुकका सेलिब्रेटी खेलाडीले भाग लिन्छन् । उनीहरुले नेपालबारे राख्ने रहेक सकारात्मक सन्देशले नेपालको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
सागका खेलहरु काठमाडौंसहित पोखरा र जनकपुरमा समेत हुनेछन् । यी तीन वटै शहर पर्यटकीय शहर हुन् । यसले पनि भावि दिनमा नेपाललाई पर्यटकीय मुलुकका रुपमा स्थापित गराउन सहयोग पुग्नेछ ।
सागमा आएका खेलाडी र अफिसियल तथा संचारकर्मीलाई नेपालले भरपुर आतिथ्य प्रदान गर्दैछन् । उनीहरु स्तरीय होटेलमा बस्नेछन् ।
नेपालमा पाएको न्यायो मायालाई उनीहरुले आफ्नो मुलुकमा प्रवद्र्धन गर्न सक्नेछन् । यसलाई नेपालले सोही अनुसार लाभ लिन सक्ने छ । भ्रमण वर्ष नेपालमा १ जनवरी र विदेशमा ७ जनवरी २०२० मा औपचारिक उद्घाटनको तयारी रहेको छ ।